Taxanaha iridda iridda, Taxanaha Gawaarida Gawaarida, Hook Series - Qianchuan
Zinc Alloy Albaabku wuxuu istaagayaa Taxanaha 008A
Taxanaha Zinc Daawaha Door Stopper 2001-madow
Taxanaha Zinc Alloy Door Guard 001-1 anti silsiladda albaabka
Waxaan soo saarnaa cabbirro kala duwan, qaabab, qalab, farsamo daabacan iyo jajab; loo habeeyay codsigaaga Laga soo bilaabo soo noqnoqoshada hooseeya illaa soo noqnoqoshada aadka u sareysa ama waxaad dooran kartaa jajabyo asal ah ama iswaafaqsan. Ma jiro siyaasad amar ugu yar inagu siinayo dabacsanaan aan kaga jawaabno dhammaan baahiyaha macaamiisheena.
Ahama Qalabka Albaanka Qalabka Albaarta ah 932 SOLID （304SS）
Taxanaha Hook Shiinka Shiinaha 359-505 （3-9）
Laalaad Wheel Taxanaha 208-01 sliver
Dabaqa albaabka nuugista albaabka rakibida-hordhaca habka joogsiga albaabka dabaqa
Albaabka albaabku waa qalab yar oo ka dambeeya albaab kasta oo ka hor istaagaya inuu albaabku garaaco darbiga. In kasta oo albaabka albaabku yar yahay, haddana saameyn weyn buu leeyahay. Qalabka albaabku wuu yareyn karaa buuqa wuxuuna ka hortagi karaa inuu albaabku ku dhaco derbiga oo uu waxyeello u geysto albaabka ama darbiga. Sucti albaabka dabaqa ...
nus nus Albaabka Jooji cinjir
Sidee loo ilaaliyaa joogsiga albaabka Door Stop, oo sidoo kale loo yaqaan taabashada albaabka, sidoo kale waa albaab ka dib marka la furo qalabka meelaynta nuugista, si looga hortago dabaysha inay dhacdo ama taabato albaabka oo la xiro. Door Stop wuxuu u qaybsan yahay magnet joogto ah Door Stop iyo albaabka elektromagneticga Jooji laba nooc, joogtada ...
Waa dhaqan aad u caam ah in lagu rakibo albaabka albaabka gadaashiisa albaabka 'Zinc Alloy Door Stop'. Jilitaanka albaabka yar, ma jirto door yar, waxay ka fogaan kartaa albaabka waxyeelo aan loo baahnayn, adeegsiga isla waqtigaas waa hab aad u habboon Ku rakibida Zinc Alloy Door Joojinta nuugista go'aaminta naqshadda Marka ugu horreysa, ...
Habka rakibaadda joogsiga albaabka
Joogitaanka albaabka caadiga ah sida ku xusan foomka rakibidda wuxuu u qaybsan yahay nooca rakibaadda derbiga, nooca rakibaadda dhulka, nooca caagga ah, nooca birta ah iyadoo loo eegayo maaddada Nooca darbiga albaabka korantada elektromagnetic-ka iyadoo loo eegayo qaab-dhismeedka kala duwan wuxuu u qaybsan yahay heerka caadiga ah ...
Asalka giraangiraha albaabka
Asalka taayirrada albaabbada ： Sida ku xusan Taariikhda Guud ee Adduunka, giraangiraha markii ugu horreysay waxay ka muuqdeen Mesobotamiya, Shiinaha dhexdoodana, giraangiraha waxay u muuqdeen qiyaastii 1500 BC. Adoo rogaya giraangirta, isku dhaca dusha sare ee xiriirka si weyn ayaa loo yareyn karaa, walxaha culusna c ...